शावर पछि धेरै मानिसहरू, शरीर आईपुग्छ, कहिलेकाहीं पनि बुलबुले र छालाहरू हुन्छन्। पानीको कारण खुट्टाले दुर्लभ होइन।
एक नियमको रूपमा, स्नान पछि, शरीर ती व्यक्तिहरूमा खुल्ला हुन्छ जसले त्वचाको बढि संवेदनशीलता छ कि तत्वहरू वा पदार्थहरूलाई डिटर्जेंट बनाउँदछ। यो किन भयो भने अझै स्पष्ट छैन। तर त्यहाँ एक धारणा छ कि छालाको प्रतिकूल कारकहरूसँग, विशेष एंटीबडी उत्पादन हुने हो, जो खुजलीको कारण हो। उनीहरूको विकासमा मुख्य भूमिका हिस्टामिनद्वारा खेल्न सकिन्छ।
कहिलेकाहीँ, स्नान पछि पछि खुट्टाको छाला लुकेको रोग, endocrine पथविज्ञान र रक्त रोगहरूको कारण देखिन्छ। यदि यो हो भने, त्यसोभए त्यस्ता घटना को रोग को गहन तंत्र संग सम्बद्ध हुन सक्छ। नतीजा, जलीय ईटायोलजी हृदय रोग र भौतिक विज्ञानमा विभाजित छ।
शरद पछि शरीर खरोंच। यस घटनाको कारण
खुजलीको भौतिक कारण:
पानी को घटक तत्वों को सम्रूपता: कठोरता; क्लोरीन को उपस्थिति; अन्य समापन।
डिटर्जेंट मिश्रण को रचना को लागि एक व्यक्तिगत असंतोष को उपस्थिति।
खुट्टाको पाथोलोजी कारणहरू:
जिगरको विभिन्न मार्गहरू।
छाला पथोलोजी: लिचिन, स्क्याब।
यदि शरीर शावर पछि खरोंच हुन्छ र पानी संग एक स्पष्ट सम्बन्ध छ, तर जलन को कुनै अन्य पुष्टि कारणहरू छैनन्, यो तपाईंको सम्पादक यिदपथिक एक्यूपैक्चर खुजली सम्भव छ। यो एक रोग हो जुन मानसिक विकारको आधारमा हुन्छ, उदाहरणीय राज्यको साथ।
रोगको एक idiopathic संस्करण संग, urticaria प्रकट हुँदैन, छाला मा कुनै भीला छैन। एनानेसिसमा कुनै पुरानो पथोलोजीहरू र दबाइहरूको प्रयोग छैन। खुट्टा खुल्ला हुन सक्छ वा एक विशिष्ट क्षेत्रमा स्थानीयकरण गरिएको, उदाहरणको लागि, माथिल्लो सिमेन्टमा।
किन छाड पछि शरीर सफा गर्दछ? अक्सर यस्तो घटनाले जलीय एलर्जीको बोल्दछ। धेरै दुर्लभ पथोलोजी, खुट्टामा छालामा रथहरू थपिएका छन्। घटनाको प्रकृति स्पष्ट छ। तर त्यहाँ एक धारणा छ कि यो एक cholinergic प्रतिक्रिया मा हिस्टामिन को विकास को कारण हो।
यस विकार देखि पीडित व्यक्ति पानी संग धेरै सावधान रहन्छन्। यसको साथ अन्तरक्रिया गर्दा, विशेष गरी लामो समय सम्म, अप्रिय परिणामहरू भरी छ।
निदान र एलर्जी प्रिटोरिट को उन्मूलन को तरिका
यदि एक व्यक्तिसँग छाड पछि पनी छ भने, सबै भन्दा पहिले यो यो के भयो पत्ता लगाउन आवश्यक छ। हामीले माथि उल्लेख गरेका छौं कि यस घटनाका थुप्रै कारणहरू छन्, सबैभन्दा हानिकारक urticaria बाट गम्भीर प्रणालीगत रोगहरूमा, जुन बिना उपचारले स्वास्थ्य स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्न सक्छ।
खुट्टाको लागि निवारक उपायहरू एक उचित पोषण हो। सबै तलामा, मसालेदार, नमकीन बर्तन र कफीको साथ बलियो चिया पनि खुट्टा लाग्दछ। हानिकारक उत्पादनहरू खाने रोक्न आवश्यक छ वा कम्तिमा आफ्नो नम्बर कम गर्न आवश्यक छ। सही आहारले आन्तरिक अङ्गहरूको कामलाई नियन्त्रण गर्दछ र मूड उठाउँछ। एकै समयमा, तपाईंलाई भिटामिन, आयोडिन युक्त उत्पादहरू, अधिक फलफूल र सब्जियां उपभोग गर्न आवश्यक छ।
साथै, छाला हेरचाहको लागि स्वच्छता उत्पादनहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन सक्छ, किनभने तिनीहरू पनि जलन उत्पन्न गर्न सक्छन्। हाइपोलार्गेनिक औषधी वा बच्चा साबुन प्रयोग गर्ने सबै भन्दा सजिलो तरिका। यसले तपाईलाई एलर्जी समस्याबाट बचाउनेछ।
यदि सबै निवारक उपायहरूले मद्दत गरेन भने, तपाइँ निश्चित रूपमा विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ। डाक्टरले आवश्यक अध्ययनहरूको वर्णन गर्नेछ जुन बिरामीको कारणलाई स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ र त्यसपछि आवश्यक उपचारको वर्णन गर्नुहोस्। यसबारे नबिर्सनुहोस्, किनकि समयमै निदान र ठीक तरिकाले प्रारम्भिक उपचारले व्यक्तिलाई लामो जीवन बिताउन मद्दत गर्नेछ।
यदि शरीरलाई फ्याँकिन्छ पछि, पर्सेस्टेसिया छ, त्यसपछि जान्दछ कि जलीय खुट्टा देखा पर्दछ। यस्तो प्रतिक्रियाले पनि तरल संग छोटो अन्तरक्रियाको साथ हुन्छ। एक रथ संग र बिना हुन सक्छ। इञ्च शावरको सुरुवात पछि वा केहि समय पछि स्वच्छता प्रक्रिया पछि लागी पहिलो मिनेटमा देखिन्छ। यस्तो घटनाको अवधि दुई मिनेटदेखि दुई घण्टासम्म हुन्छ, यो सबै व्यक्तिको व्यक्तिगत विशेषताहरूमा निर्भर गर्दछ।
तथापि, ठण्ड र थर्मल urticaria बीच भेदभाव - यो जब खुजली निश्चित तापमान को तरल देखि मात्र हुन्छ।
एक तौलिया संग पानी को एक मजबूत धारा र सक्रिय रिंगिंग एक समान घटना हुन सक्छ।
वृद्धामा एक्वाटिक प्रिरिटस एक प्रकारको रोग हो जुन 59 वर्ष पछि हुन्छ। Exacerbation पछि बाँकी समय पछि, यो रोग पुरानो हुन्छ। त्यहाँ सेन्टिग्रेसन ग्यार्सोसिस छ। एक नियमको रूपमा, जाडोहरूमा चरम बिरुवाहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले सिनेल गेरोसिसलाई वातावरणको तापमानमा नाटकीय रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ।
यदि शरीर शावर पछि खरोंच भएको छ भने, यो रगतको पथहरू बारे कुरा गर्न सक्छ।
यसमा निम्न समावेश छन्:
1. म्यालालोमा रोग।
3. होडकिनको रोग।
4. रगतमा लोहेको कमी।
Polycythemia एक रक्त रोग मा erythrocytes को वृद्धि संख्या द्वारा विशेषता एक रोगशास्त्र हो। रक्त मा रोग को प्रगति संग, सबै तत्वहरु को संख्या पनि बढ्छ।
शरीरको छाला किन छाडेर राख्छ? त्यस्तो प्रतिक्रियाले पालीसाइट्याम भनिन्छ रोगलाई संकेत गर्दछ। एक व्यक्तिको रगतमा यो रोगविज्ञान संग, सेतो रक्त कोशिकाले पानी-घुलनशील पदार्थहरू उत्पादन गर्दछ जुन छालाको भाग्य हुन्छ। Endocrine मार्गधर्म संग एक समान घटना हानिकारक पदार्थों को cumulation संग एक संगणक छ, चयापचय द्वारा बदल दिए। निस्सन्देह, यसले सबै प्रणालीको कामलाई बाधा पुऱ्याउँछ। उदाहरणका लागि, सुक्खा छाला र खुट्टाले मधुमेहको विकासको बारेमा कुरा गर्न सक्छ। यसैले, यो रक्त शर्करा स्तर को जाँच को लायक छ।
अन्य सम्भावित कारणहरू
थाइरोइड हार्मोन को अत्यधिक उत्पादन संग छाला को एलर्जी केन्निन को गठन, शरीर को तापमान र xerosis मा वृद्धि संग जुडे हो।
योभर रोगसँग सम्बन्धित इञ्चनले रक्त वा प्रोस्टाण्डिन्स र हिस्टामिनमा पित्री एसिडको उच्च सामग्रीद्वारा उत्प्रेरित गरेको छ। एलर्जी सामान्यतया र छाला थिईरहेका छन् र रातो रगतमा तीव्र हुन्छन्। एक यस्तो अभिव्यक्तिको लागि ध्यान दिनुपर्दछ, अन्यथा हेमोक्रोमेटिस हुन सक्छ।
छाला रोग संग, पानी मा खुजली को कुनै निर्भरता छैन। त्यस्ता प्रक्रियाहरू मात्र सम्पूर्ण शरीरमा सूक्ष्मजीवहरू नष्ट गर्न सक्दछ।
यदि तपाइँसँग कीराहरू छन् भने, शरीरलाई इञ्चलाई पछाडि पछि, यो परजीवीहरूको महत्त्वपूर्ण गतिविधिको उत्पादनसँग शरीर विषाक्त गर्ने प्रक्रियाको कारण हो।
कसरी मद्दत गर्ने?
यदि शरीरलाई फ्याँकिन्छ भने, मैले के गर्नु पर्छ? खुजलीको उपचार गर्न, तपाईलाई वास्तवमा यसको कारण जान्न आवश्यक छ।
स्वच्छता उत्पादनका लागि प्रतिक्रिया हुन सक्छ। यदि यो मामला हो भने, त्यसपछि hypoallergenic वा बच्चाको प्रसाधन संग आफ्नो मेकअप बदल्नुहोस्। तपाईं आफैलाई साबुन निर्माताको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि छालाको संवेदनशीलता क्लोरीनमा प्रकट भएको छ भने, यो धुनुको लागि सबै भन्दा नमिलीकरण गर्ने माध्यम प्रयोग गरी लायक छ। र पछि स्नानले केही तेलले छाला स्नेह गरेपछि, उदाहरणका लागि "जॉनसन बच्चा"।
यदि भौतिक स्थितिलाई अनुमति दिन्छ भने, तपाईं पानी फिल्टर स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ।
Idiopathic एक्यूपंक्चर खुजली को निष्कर्ष निकाल्न को लागि, एंटीहिस्टामिन को आवश्यकता हुनेछ। उदाहरणको लागि, यो ट्याबलेटहरू "सुपरट्रिन", "लोराटोडिन", "निकलर" र अन्य हुन सक्छ।
यदि खुजलीको पुरानो बीमारी संग सम्बन्ध छ भने, यो हटाउन यो अन्तर्वासय रोगको उपचार गर्न आवश्यक छ।
एक्वाटिक खुजली रक्तचाप को शुरुआत देखि धेरै वर्ष पहिले हुन्छ। यसैले, जो यो छ, यो हरेक वर्ष को hematologist बाट जाँच गर्न आवश्यक छ।
कैसे खुट्टा संग व्यवहार गर्ने? रोकथाम विधिहरू
खुजलीसँगको सामना गर्न मद्दत गर्नेछ:
विशेष कस्मेटिक्स को प्रयोग। यसमा एक पोषणयुक्त क्रीम वा इमोलेंट दूध, साथसाथै शरीरको लागि हल्का तेल समावेश गर्न सकिन्छ, जुन तीव्र छालामा छाँडै तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ।
जडी बूटियों को कण संग गरम स्नान। स्नानमा खुजलीलाई हटाउन तपाईंले म्यान्न्हहो, बर्को श्लोथ, जुनून निकासी जोड्न सक्नुहुन्छ।
छाला चिन्नुहोस्। अक्सर, यस प्रयोजनको लागि सासालिलो शराब प्रयोग गरिन्छ। यसमा तपाईं मरिचमन्टलाई जोड्न र रक्सीको लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
ग्याजेटहरू। यदि शरीरको कुनै भाग खरगोश हुन्छ भने, यो बोझबाट लोशन लाग्न सम्भव छ। यसलाई बनाउनको लागि, तपाईंलाई 400 मिलीलीटर पानी र 1.5 चम्मच चाहिन्छ। एल रोपण को जड सामग्रीहरू 30 मिनेटको लागि पकाउन सकिन्छ।
उपयोगी पेय। उदाहरणका लागि, तपाईं साधारण डिल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक टुक्रा उबलिएको पानीको साथ बाँड्न सकेसम्म सानो कुचो हुनुपर्छ।7दिनको लागि यस्तो गिलास हरेक दिन पिउन आवश्यक छ।
तंत्रिका तनाव प्राप्त गर्नुहोस्। यदि एक व्यक्ति धेरै थकित छ भने, उसले निश्चित रूपमा शान्त र आराम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। अधिकांश अवस्थामा, pruritus र झिंगो गायब।
कहिलेकाहीँ त्यहाँ परिस्थितिहरू छन् जसमा व्यक्ति आफैले आफूलाई मद्दत गर्न सक्दैन, यद्यपि उनी पूर्णतया जान्दछन् कि यो कसरी भयो। त्यस्तो अवस्थामा, सबै प्रयासहरू व्यर्थ छन्, विशेषज्ञको मदत वांछनीय छ। यो उहाँ को रोगको साँचो कारण स्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छ र यो कसरी सामना गर्न सल्लाह हुनेछ।
रोगको अवस्थामा के गर्नु पर्छ
नुहाउन पछि छालामा खुट्टालाई गम्भीर समस्याहरूको हानिकारक मानिन्छ। समस्या समाधान गर्न मानक विकल्पहरू मात्र अस्थायी राहत दिन्छ, किनभने कारण अस्पष्ट रहन्छ। यसैले, यदि शरीर को खुट्टा पारित गर्दैन भने, तत्काल चिकित्सा परामर्श सिफारिस गरिएको छ।
प्रत्येक अवस्थामा, रोगको एक व्यक्तिगत परीक्षा आवश्यक छ। निदान गरे पछि, एक उपयुक्त उपचार निर्धारित गरिएको छ। चिकित्सक एजेन्टहरू, मलहम, क्यान्सर, इंजेक्शन र अन्य विधिहरू प्रयोग गरिन्छ। निर्धारित औषधि रोगको क्लिनिकल अभिव्यक्ति सामना गर्न मद्दत गर्दछ।
यो खुट्टाको छालाको नजिकको ध्यान तिर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि उपचार निर्धारित गरिएको छ भने, समस्या चाँडै गायब हुनेछ।
अब यो स्पष्ट छ किन शरीरमा छाला बौछार पछि खुसी छ। हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो लेखले यस मुद्दालाई बुझ्न मद्दत गर्यो। स्वस्थ हुनुहोस्!
के unicorn (टैटू) गर्छ?
सेल्युलाईट बाट हनी मसाज एक सुन्दर सुन्दर नुस्खा हो।
घरमा नाकमा कालो डट्स कसरी squeeze गर्न? म नाक कालो डट्स squeeze गर्न सक्नुहुन्छ?
लुगा मा beadwork: विगतका वर्तमान सदियों देखि सांस्कृतिक परम्परा
एक चिरपरिचित नाम - Vasileva। मूल
मार्शल Petrov Vasiliy Ivanovich: जीवनी, परिवार
सबैलाई खुसी पार्न प्रयास नगर्नुहोस् - यो विफलता को लागि एक नुस्खा छ
क्यामेरामा अपार्टमेंटमा देखा पर्यो? हामी आक्रमणबाट छुट्छौं